သော့ခတ်ပိတ်ထားရန်သင်၏ရင်ခုန်စရာစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူစကားလက်ဆုံမည်သို့ဆက်လက်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ - သတင်း
Lockdown သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များအားလုံးကိုဒွိဟဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်တူညီပြီးတစ်နေကုန်ဖြစ်ရပ်များကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်လသာဆောင်ရှိမရှိ၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့မိဘတွေ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့သီးသန့်ခွဲထားတာလားဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုကသေချာပါတယ်။ အကယ်၍ သင် lockdown မဖွင့်ခင်တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်ခဲ့ရင်သင်ဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့စကားပြောစင်မြင့်အလယ်မှာတစ်နည်းနည်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်ကိုရှောက်သွားဖို့လုပ်နေပါတယ်။ ဤသို့သောလိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချမ်းအေး။ အထီးကျန်သောညများကိုဖြတ်သန်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ် quarantine ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသွားနှင့်ဒုတိယ Boomer မျိုးဆက်ဖြစ်လာဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုကဲ့သို့သောအရည်ပျော်စေတော်မူပြီ ရုံဖြစ်ကောင်း။ (ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ငါ့သားဟူဂိုကိုခေါ်သွားတယ်?) ။
“ စကားပြောစင်မြင့်” သည်အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်လခန့်ဖြုန်းတီးနေသကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည် cuffed ရမည့်အချိန်နှင့်တူသည်
- ဟမ်? (@maxxvrde) 2020ပြီလ 23, 2020
စကားပြောအဆင့်၏ဘေးအန္တရာယ် ... uh ... ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့်အခြားသူတစ် ဦး သည်မီးအိမ်တစ်လုံးကဲ့သို့ရုန်းထွက်လျှင်တောင်မှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစကားမပြောနိုင်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစကားပြောခြင်းသည်သင့်အားတစ်စုံတစ်ရာသောစကားစမြည်ပြောဆိုသောခြောက်သွေ့သောနေရာ၌ဆင်းသက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထံမှယူပါ။ အမြဲတမ်းများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အကြောင်းအရာများစွာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းပြောသောလူတစ် ဦး (ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်မြင်ပါသည) ။ ၎င်းကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကွန်ဂိုဘယ်နေရာကိုသွားရမှာလဲ၊ ဘယ်ကိုမေးရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ငါ့ပြည့်လျှံနေတဲ့ blabbermouth ကနေမိခင်ငှက်လိုမင်းလိုကလေးငယ်တွေဆီကိုခင်ဗျားဆီသို့။ ။ ဒီမှာကွန်ဂိုစီးဆင်းနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြေခံအကျဆုံးအစွန်အဖျား, ထို fucks ဘို့အလိုငှါသင်တို့ကိုယခုစဉ်းစားနေသိ? ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့နေ့ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟုမေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားရံဖန်ရံခါမေ့တတ်သည့်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့တစ်တွေတစ်နေ့လုံး quarantine လုပ်ခဲ့တာကိုတစ်ခါတလေရက်စက်တတ်တဲ့ဟာသလိုခံစားရနိုင်တာကိုငါသိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဘာမှမလုပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ - ငါတို့ဖြစ်ရင်အဲဒါဟာနေ့စဉ်အတူတူပါပဲ။ သင်တို့မူကားအပြုသဘောကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်, အဆိုးမြင်ဖြစ်ပါဘူး။ သင်၏တစ်နေ့တာသို့မဟုတ်သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်ရွှေရောင်ရွှေဂတ်အဖြစ်အသုံးချရန်တစ်ခုခုရှိရမည်။ သူတို့မိသားစုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းခုံမှုရှိခဲ့လား။ အိုးဘာအကြောင်းနှင့်သင်၏ရပ်တည်ချက်ကဘာလဲ အစာစားချင်ပါသလား ဒါဘာလဲ? သင်ချက်ပြုတ်နိုင်မလား? သူတို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဖတ်ကြသလား။ အားလုံးအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြပါ! သင်အမှန်တကယ်ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအနီရောင်အလံတွေအားလုံးကိုစောစောစီးစီးထသွားစေတယ် (ဆိုလိုသည်မှာသူကသူ့အမေကိုခွေးလို့ခေါ်လျှင်ရှောင်ရှားရန်တစ်ခုတည်းလား။ ) ဘာလို့လဲဆိုတော့၎င်းမှထွက်လာတဲ့အခြားစကားပြောဆိုမှုလမ်းကြောင်းဘီလီယံရှိသည်။ ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကိုဘယ်လိုမေးလဲဆိုတာကိုဆက်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ လူတိုင်းရဲ့ကလေးဘဝနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဒါမှမဟုတ်အများကြီးတက် messed ။ အကယ်၍ သင်ဘာကြောင့်သူတို့ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသင်နားလည်ချင်ပါက၎င်းသည်သင်မေးနိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ သငျသညျဤအမှုကိုပြုများနှင့်နက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းရလျှင်သင်သူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်း, သို့သော်, ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ရုံအန္တရာယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုယခုတက်ချပြီး။ ဒီမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်။ မကျဘူး။ အိုးနောက်ကျလွန်းတယ်။ သငျသညျကျဆင်းခဲ့သည်။ ကံကောင်းပါစေ!
fave ရုပ်ရှင် / စာအုပ်များအကြောင်းကိုမေးပါ
စကားပြောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မှလာသည်ကိုစောလွန်းပါစေ၊ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်တွင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဒါဟာစကားပြောဆိုမှုကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ၊ သင်နှစ် ဦး စလုံးပြောတာနှင့်အတူတော်တော်လေးအဆင်မပြေနိုင်ပါ၊ အကယ်၍ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလွန်မြင့်မားနေပါကသင်သည် Beam Me Up Softboi ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအခြားစကားဝိုင်းများစွာကိုကုန်ဆုံးပြီးတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကားတွေအားလုံးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင် ... သင်ဘာလုပ်နေလဲ။ ဒါက shit ရဲ့အရေးကြီးတယ်! ပထမ ဦး စွာ Vibe စစ်ဆေးရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သူအကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ Twilight ဆိုလျှင်ကော။ (သူ့ကိုလက်ထပ်ပါ။ ) သို့မဟုတ်ပါက * gags * guh uh တောင်းပန်ပါတယ်, uh * gags နောက်တဖန် * အမှတ်တမဲ့၏ဝံပုလွေ Str- oh ဘုရားသခင်ငါတောင်မပြောနိုင်ပါ။
သင်ဤဆောင်းပါးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အဘို့အလုံလောက်အောင်သေပြီဒါပေမယ့်သင်ဆဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ် FaceTime နေ့စွဲအပေါ်သွားကြပြီမဟုတ်လျှင်, ကလေးများ, သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီပေးနေမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားကြည့်ပါ! သင်ထင်သလောက်ဘယ်တော့မှကြောက်စရာမလိုပါ၊ သူတို့၏အသံကိုသင်အမှန်တကယ်ကြားလိုလျှင်သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်အသံမှတ်စုများကလှည့်ကွက်ကိုလုပ်နိူင်သည်။
တစ် ဦး Lil sext ရှိသည်
အင်းငါကပြောခဲ့တယ် တဖန်ငါကထပ်ပြောပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသေး sexted ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်သင်နှစ် ဦး စလုံးကပတ်ပတ်လည် skirting နေလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူပြtheနာပါပဲ။ သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးရုံကွန်တိန်နာပင်သေပြီမဟုတ်ပါ, ချွတ်ရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချင်တယ် - သင်ရုံလွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ညတည်းမှာပဲ sexting ကိုနည်းနည်းလောက်စလိုက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် post nut ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နောက်မှစကားလက်ဆုံလျှော့ချကူညီလိမ့်မယ်။
ဤသည် blurting ဟုခေါ်သည့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်တကယ့်အရာဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုပြောနေတာလဲ၊ မင်းတို့ပြောတာတွေကို Cool နဲ့ Intelligent filter များတစ်ဘီလီယံလောက်ဖြတ်သန်းသွားမယ့်အစားသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ရုံ '' လိုက်တယ် fuckin တစ်ခုခုပြောပါ။ သူတို့ပတ်ပတ်လည်ကပ်လျှင်, သူတို့ကတကယ့်တ ဦး တည်းပါပဲ။
သူတို့တိတ်ဆိတ်ဖြည့်ပါစေ, overcompensate ပါဘူး
blurting ၏ဆန့်ကျင်ဘက်။ သင်ဟာသဘာ ၀ မှုန်ဝါးနေပြီးစကားစမြည်ပြောနေတာကြာပြီလို့ခံစားရရင်သူတို့ကသင့်ကို ဦး ဆောင်ဖို့သင့်ကိုအားကိုးနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူမှဒီတာ ၀ န်ကို ၂၄-၇ မကနှစ်သက်ကြဘူး။ လူနှစ် ဦး တောင်မှစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကကောင်းတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်အားမေးခွန်းတစ်ခုမေးရန်မျှော်လင့်သော်၎င်း၊ သူတို့ကသင့်ကိုတကယ်ခြောက်သွေ့သောတုန့်ပြန်မှုပေးသည့်အခါ - များများစားစားမပေးရ။ ငါကသူတို့ကို shit chat လုပ်တာအတွက်ပေးဆပ်ရတာလို့ထင်ချင်တယ်။ ခြိမ်းခြောက်အသံပေမယ့်ကြောင့်ကြောင့်ပါပဲ။ ပိုကြိုးစားပါ။ ကျေးဇူးပြု။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများဆုံးခံစားမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးပုံစံဖြစ်သည်။ ကွန်ဂိုသို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသောစကားလုံးကိုဖြုန်းတီးပစ်လိုက်ခြင်းသည်ထူးဆန်းဟန်ရှိသော်လည်းသင်၏အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်အားနည်းသော dickwad မဟုတ်ပါက၎င်းသည်၎င်းတို့နှင့်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ Plus အား, ကသိရန်ရုံပျော်စရာပါပဲ။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ဉာဏ်စမ်းပဟေ.ိတစ်ခုယူပါ ပြီးတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိပြီးဆွေးနွေးပါ။ အိမ်မှငါ့ထံမှတစ် ဦး ကအခမဲ့ convo ခေါင်းစဉ်! စိတ်မပူပါနဲ့။ အချိန်မရွေး!
သင်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းနေပါကဤမေးခွန်း ၃၆ ခုကိုချစ်မြတ်နိုးပါ
စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သည်မေးခွန်း ၃၆ ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူနှစ် ဦး ဖြေဆိုသောအခါသင့်အားအခြေခံအားဖြင့်သင့်အားချစ်မြတ်နိုးလာစေသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဆေးနှင့်အတူမပေး, ငါသည်လည်းငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာနိုင်အောင်ဤ 36 မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကဘာလဲဆိုတာဟေ့ drop ရန်သင့်အားငါမပြောနေတာလားကြည့် ထိုလူကိုသင်ခြောက်ရက်စာပို့ခဲ့ သင်ထိုသို့လှည့်လည်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်အချို့ကိုပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏စိတ် ၀ င်စားစရာမေးခွန်းများတွင် - သင်နာမည်ကျော်ကြားလိုပါသလား။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ကဘာလဲ။ မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာဘာကိုကျေးဇူးတင်ဆုံးလဲ။ သို့ရာတွင်၊ မေးခွန်းများအားလုံး quarantine တွင်ဖြေကြားနိုင်သည် - ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်သင့်ကိုလေးမိနစ်လုံးလုံးကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ Facetime မှာတစ်ယောက်တည်းမထားပါနဲ့။
• ရိုင်းရည်းစားရည်းစားရဖို့နှင့် lockdown တစ်လျှောက်လုံးသူ့ကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရန်
• quarantine တွင်စာပို့နေသည့်ကောင်လေးသည်ဤအနီရောင်အလံများထဲမှတစ်ခုခုကိုပြနေလျှင်၎င်းကိုပိတ်လိုက်ပါ
Unsplash မှ Daniel Olah ၏ပုံရိပ်